Sweet November (2001) | MM Movie Store
ဒီတဈခေါကျမိတျဆကျပေးခငျြတဲ့ ဇာတျကားလေးကတော့ နိုဝငျဘာလရဲ့ အခဈြဇာတျလမျး Drama လေးပဲဖွဈပါတယျ။ ခှေးလေးတှကေို ခဈြတဲ့သူ၊ မိသားစုတှနေဲ့ အဆငျမပွပွေီး တဈယောကျထဲဘဝကို ရူးရူးမိုကျမိုကျနဲ့ပြျောပြျောရှငျရှငျဖွတျသနျးနတေဲ့ ကငျဆာရောဂါသညျမလေး ဆာရာ….
ဘဝကို ပွေးလမျးတဈခုလို သဘောထားပွီး ဘဝကို အလုပျထဲမှာပဲ အခြိနျပွညျ့နဈမွှုပျထားတဲ့ နယျလျဆငျ……သူ့ဘဝထဲ ဆာရာဆိုတဲ့ ရူးမိုကျမိုကျကောငျမလေးဝငျရောကျလာခြိနျမှာတော့ ဘဝရဲ့အဓိပ်ပါယျ၊ ပြျောရှငျမှုတှကေိုဆာရာကွောငျ့ သိရှိခဲ့ရတယျ။
နယျလျဆငျတဈယောကျ အခဈြကိုခံစားမိခြိနျ ဆာရာ့ကို လကျထပျခှငျ့တောငျးခဲ့ပါတယျ။ နယျလျဆငျ့အခဈြကို ဆာရာတဈယောကျ လကျခံပါ့မလား။ ဘယျလိုဆကျဖွဈမလဲဆိုတာ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားစှာဖွငျ့ ကွညျ့ရှုရမှာဖွဈပါတယျ။
Sweet November ဝတ်ထုကို 1968 ခုနှဈက ဇာတျကားပွနျလညျရိုကျကူးထားပွီး Sweet November နာမညျနဲ့မငျးသားက Anthony Newley နဲ့ မငျးသမီးက Sandy Dennis တို့ သရုပျဆောငျခဲ့ပါတယျ။
2001 ခုနှဈမှာတော့ ထိုဇာတျကားကို Sweet November နာမညျနဲ့ပဲ မငျးသား Keanu Reeves နဲ့ မငျးသမီးCharlize Theron တို့ ပွနျလညျရိုကျကူးခဲ့တာပါ။ နိုဝငျဘာလရဲ့အခဈြDrama လေးကို အိမျတှငျးပုနျးကာလတှငျး ဖီးလျကွရအောငျ…..
ဒီတစ်ခေါက်မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးကတော့ နိုဝင်ဘာလရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း Drama လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခွေးလေးတွေကို ချစ်တဲ့သူ၊ မိသားစုတွေနဲ့ အဆင်မပြေပြီး တစ်ယောက်ထဲဘဝကို ရူးရူးမိုက်မိုက်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ကင်ဆာရောဂါသည်မလေး ဆာရာ….
ဘဝကို ပြေးလမ်းတစ်ခုလို သဘောထားပြီး ဘဝကို အလုပ်ထဲမှာပဲ အချိန်ပြည့်နစ်မြှုပ်ထားတဲ့ နယ်လ်ဆင်……သူ့ဘဝထဲ ဆာရာဆိုတဲ့ ရူးမိုက်မိုက်ကောင်မလေးဝင်ရောက်လာချိန်မှာတော့ ဘဝရဲ့အဓိပ္ပါယ်၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဆာရာကြောင့် သိရှိခဲ့ရတယ်။
နယ်လ်ဆင်တစ်ယောက် အချစ်ကိုခံစားမိချိန် ဆာရာ့ကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ နယ်လ်ဆင့်အချစ်ကို ဆာရာတစ်ယောက် လက်ခံပါ့မလား။ ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Sweet November ဝတ္ထုကို 1968 ခုနှစ်က ဇာတ်ကားပြန်လည်ရိုက်ကူးထားပြီး Sweet November နာမည်နဲ့မင်းသားက Anthony Newley နဲ့ မင်းသမီးက Sandy Dennis တို့ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
2001 ခုနှစ်မှာတော့ ထိုဇာတ်ကားကို Sweet November နာမည်နဲ့ပဲ မင်းသား Keanu Reeves နဲ့ မင်းသမီးCharlize Theron တို့ ပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ နိုဝင်ဘာလရဲ့အချစ်Drama လေးကို အိမ်တွင်းပုန်းကာလတွင်း ဖီးလ်ကြရအောင်…..